Ciidamadii shisheeye ee loogu talo galay inay Soomaaliya ka hawl galaan oo ku soo ruqaansanaya xuduudaha iyo xeebaha Soomaaliya.
Muqdisho,Somalia, 1 jun 2003 — - Iyadoo hore loogu dhawaaqay in waddanka Soomaaliya ay dhowaan soo gaari doonaan ciidamo hubka ka gura, ayaa waxaa durbaba la dareemayaa astaamo muujinaya in todobaadyada nagu soo fool leh, uu bilaabmi doono hawl galka hub ka dhigista ee dalka Soomaaliya.
Waxaa la arkay maraakiibta dagaalka ee Maraykanka oo ah noocyada xambaari kara diyaaradaha oo ku soo siqaya xeebaha Soomaaliya, iyagoo qayb ka ah sida hore loo sheegay ciidamada Ajanabiga ah ee la rajaynayo, inkastoo la sheegay in Maraykanka ciidamadiisu ay noqon doonaan oo kaliya kuwo xagga cirka iyo badda ka wehlin doona ciidamada kale ee ka socda dalal Afrikaan ah.
Waxaa kaloo jira warar sheegaya in Maraykanku uu ciidamada ka hawl gali doona dalka Soomaaliya ka caawin doono xagga saanadda iyo qalabka Milatari ee ay adeegsan doonaan iyo waliba qayb ka mid ah dhaqaalaha ku bixi doona ciidamada.
Dhinaca kale, dawladda Kenya ayaa todobaadkii aynu soo dhaafnay ku amartay hay�ado samafal ah oo ka hawl gali jiray gudaha dalka Soomaaliya fadhigooduna ahaa deegaano ku yaalla xadka Kenya iyo Soomaaliya kala qaybiya, inay ka durkaan sababo lagu macneeyey in halkaas dhowaan la soo dhoobi doono ciidamo milatari ah.
Dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho oo Puntlandpost ay qar ka mid ahi u warameen iyo waliba siyaasiyiinta, ayaa siyaabo kala gaar gaar ah uga hadlay ciidamadan "Ciidamo shisheeye oo la keeno dalka waxay dhibaato u gaysan doonaan dhaqankeena iyo diinteena" sidaas waxaa ku dooday nin lagu magacaabo Shiikh Cali Maxamed oo intaa ku daray in dawlad ka timaadda Mpegathi aysan noqonayn mid khayr badan sida uu hadlka u dhigay, laakiin waxaa jira dad aad u fara badan oo iyagu taageersan ciidamada shisheeye oo daahsanaya waqtiga ay waddanka soo gaarayaan.
Dalka Soomaaliya oo in ka badan 13 sano aan helin dawlad xoog badan oo hanata ammaanka iyo xasiloonida dalka ayaa waxay dadkiisu isku khasbeen inay ku noolaadaan darxumo, fawdo, gaajo, cudurro, waxbarasho la�aan iyo dagaallo aan dhamaad lahayn, iyadoo aad mooddo in hadda ay tahay waqtigii laga bixi lahaa dhibkaas, ka dib markii beesha caalamku ay muujisay taageerada ay u hayaan in hadda Soomaaliya ay mar kale cagaheeda isku taagto, taas oo markii hore beeshu caalamku ay ku kala aragti duwanaayeen.
Kulan maanta dhex maray Guddiga Xaqiiqo raadiska Soomaaliya ee IGAD iyo Puntland (Warbixin faahfaahsan kulankaas wixii looga hadlay).
Nairobi,Somalia jun 01, 2003 -Kulan ballaaran ayaa maanta wuxuu ka dhacay xarunta Madxtooyada Puntland ee Boosaaso, kulankaan wuxuu u dhexeeyey Dawlada Puntland, SRRC iyo Kooxda Hubkadhigida iyo ilaalinta xabad joojinta ee Soomaaliya ay u soo xilsaareen ururka IGAD, oo uu hogaaminayey nin lagu magacaabo Gen. Mansooba.
Kulanka waxaa ka qaybgalay masuuliyiin badan oo ka tirsan Maamulka Dowlad Goboleedka Puntland, oo uu horkacayo Madaxweynaha Puntland Cabdullaahi Yuusuf Axmed, waxaa kaloo ka soo qayb galay xubno ka tirsan Golaha SRRC oo ay ka mid yihiin Dr. Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, Dr. Hilowle Iimaan Maxamed, Gen. Maxamed Siciid Xirsi Moorgan, iyo Maxamad Maxamuud �Gacma-dheere� oo madax u ah aragtida dallada cusub iyo xubnaha wafdiga IGAD oo ka koobnaa urur goboleedyada IGAD, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Jaamacada Carabta.
Ugu horeyntii waxaa halkaas ka hadlay Cabdullaahi Yuusuf oo ku soo dhoweeyey weftigaas deegaamada Puntland, wuxuu kaloo sheegay in ay Puntland diyaar u tahay hanaan kasta oo lagu sameynayo dowlad Soomaaliyeed oo loo dhan yahay iyo sidii dadka hubka looga ururin lahaa, wuxuuna soo dhoweeyey si loo taabo geliyo dowlad Soomaliyeed in wadanka la keeno ciidamo shisheeye ka hor inta aan la dhisin dowladaas.
Wuxuu kaloo Madaxweynuhu carabka ku dhiftay in diyaar u yahay haddii loo baahdo in Ciidamada Daraawiishta Puntland ay ka qayb qaataan hub ka dhigista lagu sameynayo Soomaaliya, waxa uu yiri �Ma jirto cid iyo dowlad aanu diideyno oo iyadu ka qayb gelaysa hub ka dhigiista Soomaaliya lagu sameynayo�.
Intaas ka dib waxaa hadalkii lagu soo dhoweeyey Gen. Mansooba oo isagu madax u ahaa wefdigaan, waxa uu sheegay in aysan Soomaaliya ka jirin dagaal sokeeye ee ay Soomaaliya ka jiraan dagaalo qabiil, wuxuu kaloo intaas ku dary in dadka Soomaaliyeed ay maanta doonayaan nabadgelyo meel kasta oo ay tageena ay taas u muujiyeen.
Jeneraalku wuxuu kaloo intaas raaciyey in wadamo badan oo dagaalo sokeeye ka socodo ay leeyihiin dowlado sida Koongo, Ruwaanda, Ivery Kost iwm, balse ay nasiib darro tahay in aysan Soomaaliya wax dowlad ah aysan laheyn, hadlakiisii ayuu sii watay oo wuxuu yiri �Bulshada Caalamku waxba ka hagran mayso wakhtigaan sidii Dowlad Soomaaliya loogu dhisi lahaa, waad aragtaan AU, EU, Arab Leag iyo IGAD-ba�� wuxuu kaloo sheegay in ay Puntland u yimaadeen laba arrimood in ay kormeeraan heshiiskii 27 Oktoobar ee xabad joojinta iyo in Guddiga hub ka digista ay warbixino soo ururiyaan.
Ugu danbeyntii wuxuu Jeneraalku mahadnaq u soo jeediyey Madaxweynaha Puntland iyo Mucaaradka isagoo si weyn ugu farxay Wasiirada cusub ee mucaaradka oo fadhiyey shirkaas.
Waxaa kaloo isaguna halkaas ka hadlay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan Golaha SRRC, wuxuuna halkaas ka akhriyey qoraal ay si wada jir ugu saxiixan yihiin Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, Maxamed Maxamuud iyo Gen. Maxamed Siciid Xirsi (Morgan), qoraalkan ayaa nuxurka uu xambaarsanaa wuxuu ahaa in hub ka dhigis buuxda Soomaaliya lagu sameeyo, in wax laga qabto maleeshiyooyinka hubeysan iyo weliba maleeshiyooyinka gaarka ay u leeyihiin ganacsatada iyo NGO's-ka.
Gen. Maxamed Siciid Xirsi Moorgan ayaa isagu soo dhooweeyey in ciidamo la keeno Soomaaliya, balse wuxuu carabka ku dhiftay in ay jiraan ciidamo xoog ku haysta dhul aysan laheyn, wuxuuna talo ahaan u soo jeediyey in la xadeeyo ciidan waliba meesha uu degayo iyo in dib loogu cesho ciidamadaasi deegaanadii ay ka yimadeen.
Weftiga ayaa maanta ka baxaya magaalad Boosaaso, waxayna ku sii nagaan doonaan magaalada Gaalkacayo ee Gobolka Mudug.
Sidoo kale waxaa beri la qorsheynayaa in Madaxweynaha DGPL uu u ambabixi doono magaalada Garoowe, halkaasoo uu uga sii gudbi doono magaalada Gaalkacayo, dabadeedna shirka dibu heshiisiinta Soomaalida uga socda dalka Kenya.
Wararkii ugu danbeeyey ee caawa ayaa sheegaya in weftigaasi ay gaadheen magaalada Gaalkacyo,iyagoo halkaa ay ku soo dhoweeyeen masuuliyiinta Puntland ee gobolka Mudug. Weftigaasi waxay berito u ambabixi doonaan dhinaca gobolka Hiiraan,halkaas oo ay kula kulmi doonaan masuuliyiinta gobolkaas.